War Rasmi Ah: Barcelona Oo Heshiis La Gashay Xiddiga Bayern Munich Ee Robert Lewandowski
HomeWararka CiyaarahaWar Rasmi ah: Barcelona Oo Heshiis La Gashay Xiddiga Bayern Munich Ee Robert Lewandowski
May 14, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa heshiis la gaadhay weeraryahanka Bayern Munich iyo xulka qaranka Poland ee Robert Lewandowski oo ku jiray liiska xiddigaha uu Xavi Hernandez sida weyn u doonayey, isla markaana muddooyinkii u dambeeyey oo dhan lala xidhiidhinayay.
Robert Lewandowski ayaa la sheegay in uu go’aan ku gaadhay in uu iskaga tago Bavaria dhamaadka xilli ciyaareedka, isaga oo diiday inuu heshiis cusub u saxeexo, xilli qandaraaskiisii horena uu sannad kali ahi ka hadhsan yahay.
Waxa uu Lewandowski ku wargeliyey maamulka kooxda in aanay ka sugin heshiis cusub oo uu go’aankiisu yahay inuu soo afjaro muddo siddeed sannadood ah oo uu ka ciyaaray Allianz Arena iyo horyaalka Bundesliga oo ahayd meesha lagu bartay ee uu shan sannadood usoo ciyaaray Borussia Dortmund ka hor intii aanu sida bilaashka ah ugu wareegin Munich.
Tababaraha Bayern Munich ee Julien Nagelsmann ayaa shalay ka gaabsaday su’aal laga weydiiyey mustaqbalka Robert Lewandowski, waxaanu yidhi: “Su’aashaas waxa aad weydiisaan maamulka kooxda iyo ciyaartoyga.”
Sida uu sheegay wariyaha Sport 1 ee Kerry Hau, Barcelona ayaa heshiis shaqsi ah la gaadhay Robert Lewandowski oo ay muddo u socdeen wada-hadallo ay wax walba iskula meel-dhigeen, iyadoo uu laacibkani ogolaaday inuu heshiis saddex sannadood ah u saxeexo Barcelona.
Kerry Hau waxa uu sheegay, in wakiilka Lewandowski ee Pini Zahavi iyo maamulka Barcelona ay ka wada shaqeeyeen heshiiskan hordhaca ah ee saddexda sannadood ah, iyadoo Madaxweynaha Barcelona ee Joan Laporta uu dhinaciisa ka ogolaaday inuu bixiyo mushaharka Lewandowski iyo sidoo kale lacagta uu dalbanayo wakiilkiisa Pini Zahavi.
Barcelona ayaa hadda isku diyaarinaysa inay la hadasho Bayern Munich oo ay u bandhigi doonto lacag lagu qiyaasay €30-40 milyan oo Euro, taas oo ay rajo fiican ka qabto in kooxda Jarmalku ay aqbali doonto maadaama uu laacibkani sannad kaddib si xor ah uga tegi karayo marka uu qandaraaskiisu dhamaado.
Blaugrana ayaa waxay toddobaadkan €20 milyan oo Gini ku iibisay Philippe Coutinho oo si rasmi ah ugu wareegay Barcelona, waxaanay sidoo kale heshiisyo la galeen shirkado ay xayaysiisyo u samayn doonaan oo ay lacago badan ka heli doonaan.
Mushaharka uu Lewandowski ka qaadan doono Barcelona oo aan wali lasoo bandhigin ayay kooxda reer Spain doonaysaa ku xallin doontaa inay iska dirto dersin ciyaartooyo ah oo ay ku jiraan Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic iyo Antoine Griezmann.